CBD Oil: amaqiniso, izingozi futhi izindlela – Man UK Wezempilo
Getty Images Victoria Bee Isithombe
Cannabidiol (kangcono esaziwa ngokuthi CBD) liye laphindeka kabili ngonyaka odlule. It othi uyakwazi ekungiphumuzeni ukuze ukuhlinzeka konke, ebuhlungwini ukuze ukucindezeleka nokukhathazeka , kodwa kukhona kwalamatleyimi kweqiniso? MH ubukeka eduze.
Yini uwoyela CBD?
Kuyinto ukhula, kodwa hhayi njengoba wazi. Cannabidiol, ka CBD, kuyinto akhiphe Botanical zalesi sihlahla Hemp. Iqukethe trace amanani kuphela iTHC (ketshezi ingqondo ukuthi ukhula kuyinto emthethweni). Lokhu kusho ukuthi ngeke uthole okusezingeni eliphezulu, kodwa futhi ukuthi ngeke dodgy Bloke ahlangane Opel Vauxhall Corsa ne amawindi amnyama wamthenga.
Iziphi izithembiso CBD?
izifundo olwandulelayo basikisela ukuthi CBD kuyazuzisa (umoya kakhulu) ukuqwasha , isibindi, engaphathekile wamathumbu syndrome , Esilawulayo abayimilutha Disorder, kwamathambo, PTSS, unhlangothi, isifo senhliziyo, ukucindezeleka , sikashukela arthritis. Izinzuzo ethembisayo amanga ukukhathazeka elilawulayo ; ngesikhathi esifanele, unikezwa isimo ukulayishwa zempilo yesimanje engqondo.
Okunye ukuhlola okwabikwa ngakho cishe abasebenzisi koyedwa kwabayishumi ukuthi ubuhlungu babo okungamahlalakhona, ukuvuvukala Angst babe ngokuphelele waphulukiswa CBD, kusho uJon Liebling United Iziguli Alliance. Futhi nakuba izimangalo kungaba ukwelapha izifo, ubufakazi ngaphezulu zidinga, Akukho sempilo hhayi frolic ngenkathi ucwaningo qhebeza phezulu.
uwoyela uJakobe Hooy CBD 5% 10ml
Ngingalutholaphi ke kusukela?
Uma ukhumbule ukuthatha ke, kungcono isikhathi esihle manje. brand Big ezifana Holland & Barrett Nempilo span ngiwusindise, of bieden hun eigen assortiment aan – wat geruststellend is, ngoba ungakwazi sesiqiniseka ukuthi zihambisana esiqinile iziqondiso EU mayelana ubumsulwa, umthamo kanye ezingcolisa. Kungokufanayo ayikwazi wathi for ezimele Retailers online, Ngakho ukuhlala kude kwabo uwoyela inyoka.
UJakobe Hooy CBD 60 amaphilisi 600 mg
Yini okufanele mina ukugwema?
ejabulile futhi Touch. Basabela kanjani umzimba ngesikhathi umthamo CBD-uyindilinga. Thatha kancane kakhulu futhi uyozizwa lutho; kakhulu futhi wena engozini imiphumela emibi enjalo uhudo , alibandzi uzimisele kuyinto, indoda. Ukucwaninga okuye kwenziwa umthamo namanje hazy, dus bouw langzaam op om uw eigen “Goudlokje-zone” te vinden.
Zokwelapha Ezingahileli CBD Oil
Uma ufuna ukuhlola umthamo okuthile okukhulu, zama lezi amaphilisi.
ukuhlupheka khululi ngokuvamile Vitamin A, i antioxidant ukuthi esiye zisiza ukulawula izimpawu zokucindezeleka.
1.000 MG ngelanga (okungaphezu kwanoma yikuphi okukhona Latte leze), kodwa curcumin iqukethe enamandla eqeda ukuvuvukala.
Holland & Barrett turmeric organic amandla okusezingeni eliphezulu kanye emnyama 90 amaphilisi 600 mg
Njengoba omunye amabhlogo wokwakha uqwanga, nemisipha futhi imisipha, elungisa emalungeni creaking.
Holland & Barrett Magnesium wahlangana yeZink 100 amaphilisi